Kuzakuwiswa isigwebo kwityala labafundi be #FeesMustFall ngomso - Vernac News
EKapa – Bazakulazi ngomso ikamva labo abafundi abathathu beDyunisivethi YobuGcisa yeSingasiqithi saseKapa (CPUT) xa bevela phambi kweNkundla kaMantyi yaseBellville ekulindeleke iwise isigwebo kwityala lodushe lwe #FeesMustFall.
Iinkokheli zabafundi ezintathu zijongene nezityholo zokudelela umyalelo wenkundla nokuphemba udushe ngexesha lephulo lemfundo yamahala i #FeesMustFall.
Esi sigwebo samiselwa umhla we- 12 EyoMsintsi mhla esisithathu besivele kwiNkundla kaMantyi eBellville kwiiveki ezimbini ezidlulileyo.
Esi sigwebo sifika xeshana iinkokheli zabafundi namaqela ezopolitiko ababaxhasayo befaka uxinzelelo kuMongameli Cyril Ramaphosa ukuba abaxolele ngokonakaliswa kwempahla ngethuba lweentshukumo zika2015 no2016. Abafundi bazithethelela ngelithi iintsusa yodushe isukela ekubeni iidyunivesithi zaqesha iinkampani zoonogada zabucala ukuhlangabezana nemiba yokhuseleko kwaye bona zange baqale udushe, nto nje babezikhusela xa behlaselwa ngabanogada babucala.
Sithetha nje uKhanya Cekeshe, umfundi eFootprint Media Academy, utsala isigwebo seminyaka emihlanu emva kokufunyanwa enetyala ekutsheni isithuthi samapolisa ngo-2016. U-Amla Monageng, ongumfundi kwiDyunivesithi yaseTshwane, wafumana isigwebo sokuvalelwa endlini emva kokufunyaniswa enetyala eliquka udushe lwe #FeesMustFall, ukanti naye uBonginkosi Khanyile weDyunivesithi yoBugcisa eThekwini ulindele esakhe isigwebo kwityala lakhe lokuhlasela amapolisa ngesilingi, nelikaMcebo Dlamini ityala lisaqhuba.
UMphathiswa weZobulungisa uMichael Masutha, ephendula uxwebhu lwezikhalazo lwabafundi, uthe uMongameli uRamaphosa akazukwazi ukuxolela abantu abangekagwetywa ngoba lonto izakubonakala njengenyathelo elidelela ukuzimela kwengalo yomthetho. UMasutha uxolise ngelithi i-ofisi yakhe ikulungele ukuncedisana nabani na osele egwetyiwe ekufakeni isicelo soxelelo kuMongameli Ramaphosa.
Tagged #FeesMustFall, cput